Fahasamihafana eo amin'ny informatika sy kozinina | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny informatika sy kozinina | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Teknolojia / IT / Fandaharana / Fahasamihafana eo amin'ny informatika sy kozinina
Fahasamihafana eo amin'ny informatika kognitive sy ny fianarana milina
5 Jona 2018 Narotsak'i Lithmee
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny informatika kognitive sy ny fianarana milina dia ny computing kognitive dia teknolojia fa ny machine machine kosa dia manondro algorithma hamahana olana. Ny computing kognitive dia mampiasa algorithma fianarana milina.
Ny Cognitive Computing dia manome ny fahaizana solosaina hanamboarana sy hamenoana ny fahaizan'ny olombelona misaina handray fanapahan-kevitra. Ny fianarana ny masinina dia mamela ny famoronana algorithma fandinihan-tena handinihana angon-drakitra, hianarana avy amin'izy ireo, hahafantarana ireo lamina ary handray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany. Na izany aza, sarotra ny manisy fetra ary mizara ny fizarana kognitive mifototra sy ny fianarana miorina amin'ny milina.
2. Inona no atao hoe Computing Cognitive
3. Inona no atao hoe Learning Machine
4. Fifandraisana eo amin'ny computing kognitive sy ny fianarana machine
5. Fampitahana mifanila - Cognitive Computing vs Machine Learning in Tabular Form
Inona no atao hoe computing kognitive?
Ny teknolojia fandrindrana kognitive dia ahafahana manao maodely marina momba ny fahatsapan'ny ati-dohan'olombelona, ​​ny antony ary ny valiny amin'ny asa. Izy io dia mampiasa rafitra fandinihan-tena izay mampiasa ny fianarana milina, fitrandrahana angon-drakitra, fanodinana ny fiteny voajanahary, ary ny fanekena ny lamina, sns. Manampy amin'ny famolavolana rafitra mandeha ho azy izay afaka mamaha olana izany raha tsy misy idiran'ny olombelona.
Amin'ny tontolo maoderina, data maro be dia be no mamokatra isan'andro. Ahitana lamina sarotra azo adika izy ireo. Mba handraisana fanapahan-kevitra tsara dia ilaina ny mahafantatra ireo lamina ao anatiny. Ny computing kognitive dia ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny angon-drakitra marina. Noho izany, manampy amin'ny fehin-kevitra am-pahatokisana. Ny rafi-pitantanana kognitika dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra, traikefa taloha, ary data vaovao. Ny zava-misy virtoaly sy ny robotika dia ohatra vitsivitsy izay mampiasa computing kognitive.
Inona no atao hoe Learning Machine?
Ny Machine Learning dia manondro ny algorithma izay afaka mianatra avy amin'ny angona nefa tsy miankina amin'ny fanao fandaharana mahazatra toy ny programa mifototra amin'ny object object. Ny algorithman'ny fianarana milina dia mamakafaka ny angona, mianatra avy amin'izy ireo ary mandray fanapahan-kevitra. Mampiasa angon-drakitra fampidirana ary mampiasa ny fanadihadiana statistika mba haminavina ny vokatra. Ny fiteny mahazatra indrindra hampivelarana ny rafi-pampianarana milina dia ny R sy Python . Ankoatr'izay, C ++, Java, ary MATLAB dia manampy amin'ny fampivoarana ny rindranasan'ny fianarana milina ihany koa.
Mianatra roa mizara roa. Antsoina hoe fianarana arahi-maso sy fianarana tsy voara-maso izy ireo . Amin'ny fianarana arahi-maso dia manofana modely isika, noho izany dia maminavina ny tranga ho avy mifanaraka amin'izany. Manampy amin'ny fampiofanana ity maodely ity ny databatra misy marika. Ny setroka voamarika dia misy fampiasa sy fivoahana mifanaraka aminy. Miorina amin'izy ireo, ny rafitra dia afaka maminavina ny vokatra ho an'ny fidirana vaovao. Ankoatr'izay, ny karazany roa amin'ny fianarana arahi-maso dia ny famerenana sy ny fanasokajiana. Ny famerenam-bidy dia maminavina ny valiny amin'ny ho avy mifototra amin'ny angona voamarika teo aloha, fa ny fanasokajiana kosa dia manasokajy ireo angona voamarika.
Amin'ny fianarana tsy misy fanaraha-maso dia tsy mampiofana maodely iray izahay. Fa kosa, ny algorithm dia mahita manokana ny fampahalalana. Noho izany, ny algorithma fianarana tsy voara-maso dia mampiasa marika tsy misy marika amin'ny data mba hanatsoahan-kevitra. Manampy amin'ny fahitana vondrona na clusters amin'ny angona tsy misy marika. Matetika, ny algorithma ianarana tsy misy fanaraha-maso dia sarotra noho ny algorithma fianarana arahi-maso. Amin'ny ankapobeny, ny algorithma fianarana ny milina dia manampy amin'ny fampivoarana ny rafitry ny fianarana samirery.
Inona ny fifandraisana misy eo amin'ny informatika sy ny fianarana milina?
Ny rafi-pandrefesana kognitive dia mampiasa algorithma fianarana milina.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny computing kognitive sy ny machine machine?
Ny Cognitive Computing dia ny teknolojia manondro ireo fitaovana sy / na rindrambaiko vaovao izay manahaka ny fiasan'ny ati-dohan'olombelona hanatsarana ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ny fianarana ny milina dia manondro ny algorithma izay mampiasa teknika statistika mba hanomezana solosaina hianarana avy amin'ny angona sy hanatsara ny fahombiazan'ny asa manokana. Cognitive Computing dia teknolojia fa, ny Machine Learning dia manondro ny algorithma. Io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny informatika kognitika sy ny fianarana milina.
Ankoatr'izay, ny Cognitive Computing dia manome ny fahaizan'ny solosaina maka tahaka sy mameno ny fahaizan'ny olombelona misaina handray fanapahan-kevitra raha toa kosa ka mianatra ny machine mba hamoronana algorithma fandinihan-tena handinika data, hianatra avy amin'izy ireo, hahafantatra ireo lamina ary handray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany.
Famintinana - Computing Cognitive vs Learning Machine
Ny maha samy hafa ny computing kognitive sy ny machine machine dia ny computing kognitive dia teknolojia fa ny machine machine kosa dia manondro algorithma hamahana olana. Ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny robotika, fahitana solosaina, faminaniana momba ny orinasa izy ireo ary maro hafa.
1.SciTechUK. Computing Cognitive | Inona no azo ampiasana azy?, Filankevitra momba ny haitao sy teknolojia, 10 Mey 2016. Azo jerena eto
2.TheBigDataUniversity. Fianarana milina - Fianarana tsy misy mpanara-maso VS, kilasy kognitifa, 13 martsa 2017. Azo jerena eto
1.'2729781 'nataon'i GDJ (CC0) via pixabay
Dinithi Vithanage hoy
10 Jona 2018 amin'ny 5:48 hariva
Tsotra sy mora azo
Fahasamihafana eo amin'ny Mucus sy Mucous
Fahasamihafana eo amin'ny Saccharin sy Sucralose
Fahasamihafana eo amin'ny andininy sy ny fanoherana
Fahasamihafana eo amin'ny singa Ionic sy Binary
Fahasamihafana eo amin'ny Curry Powder sy Garam Masala